Chii Kuti Kuziva About The Railway Ticket Reservation | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Chii Kuti Kuziva About The Railway Ticket Reservation
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 01/04/2021)
Zuva nezuva chinhu chakajairika kuona kuona zviuru vakatakurwa uchishandisa njanji. Nokudaro, hazvishamisi, kuti munjanji anozivikanwa seMagwaro lifeline munyika. pasina, dzinogona kuve mhirizhonga huru uye zvinogona kukonzeresa nyonganiso nematambudziko akakomba.
Ataura kuti, Kuwanikwa matikiti inova huru nyaya nguva dzose zvinoitika. Kana uchida bhuku matikiti dzenyu, unofanira nechokwadi kuti matikiti dziripo uye vakagadzirira.
Ndedzipi mhando dzeitiro rekubhuka?
Iwe une mhando dzakasiyana dzevarairidzi mumatiketi ezvitima. Vane zvakakwana. Kazhinji The zvakakwana ndiyo ungana nekuti vanhu havana bhuku matikiti dzavo mukamuri ichi.
Panguva mutambo nguva, zvinova zvisingatsungiririki uye huwandu hwevanhu vari kufamba muchitima hunogona kusvika nyore mazana akati wandei. Kana muri vakwegura kana ane zvinoyerera mumuviri, zvino zvakanakisisa bhuku iri reserved chitima kamuri pane zvakakwana.
The chinotevera mupanda mhando ndiyo murairidzi akarara. The murairidzi akarara sezvo zita anoenda inoita kuti kufaranuka uye hope kumarudzi enyu rwendo. Mumwe chitima kunouya kanenge 10 bogies kuti vari akarara varairidzi.
Unogona kuunza piro uye mubhedha pachako jira wako kana uchida. Yakanaka vaya rwendo bhajeti. The akarara 3 Danho AC mupanda vakasununguka uye zvishoma pamusoro murairidzi akarara Railway Ticket Reservation.
Ndivo zvishoma anodhura kana tichienzanisa kuti murairidzi akarara nekuti vane AC. The 2-weDanho AC mupanda ndeimwe nzira kufamba. Ndizvo garika uye imi Anopiwa zvikuru umbozha.
Izvo zvinogona kutaurwa nezve yekutanga-kirasi AC compartment. Izvozvo nokuti Anopiwa worudzii voga, izvo zvaunoda. Iyi ndiyo nzira inodhura kwazvo yekufamba. Pakupedzisira, Chair motokari.
Kana uri parwendo pfupi akareba, zvino unogona kuenda kushandisa cheya motokari. Mari yacho yakaderera pane yekutanga AC kirasi njanji tikiti kuchengetedza. zvisinei, uchada nechokwadi kuti zvigaro anowanika kuburikidza SMS wakangwarira kana paIndaneti cheki.
Kushandisa PNR, unogona nechokwadi kuti tikiti rako rose wakawandirwa. pakupedzisira, unofanira kuona kuti zvigaro dziripo. Unogona kuita kuti kuona kuti PNR chinzvimbo rakarurama usati kuti mberi Railway Ticket Reservation bookings.
sezvo nguva dzose, ita bookings enyu uchishandisa kwakavimbika mashoko akafanana Save A Train.
Unoda embed yedu Blog pambiru wako panzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fall-you-need-to-know-about-the-railway-ticket-reservation%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#reservation njanji matikiti nezvitima